High oleic amafutha sunflower - Product Ikusasa
Namuhla emashalofini ezitolo kanye nezitolo ezinkulu, ungathola ezihlukahlukene izinhlobo zemifino amafutha. Kuyinto omunye imikhiqizo ewusizo kakhulu efanele phakathi kwabo - oleic okusezingeni eliphezulu amafutha sunflower, okuyinto has izici esifanayo njengoba omnqumo, nakuba izikhathi ezintathu noma ezine zalo eshibhile. Okuwukuphela lolwehlukanisa lezi amafutha kuyinto ukunambitheka omnqumo kuwo eyinqaba, futhi ngezinye oleic okusezingeni eliphezulu - hlangothi. Ingabe ilungu kokubili imikhiqizo esilinganayo vitamin E, oleic acid, amafutha ayegcwele. Ngakho ngeke uwoyela namuhla oleic High ubhekilanga esikhundleni ekahle omnqumo phesheya? Kulesi kumelwe sikuqonde namuhla.
Okushiwo oleic acid
High oleic amafutha sunflower iqukethe iphesenti eliphezulu oleic acid ukuthi liyingxenye omega-9 fatty acid. Akhuthaza ukwakheka Antioxidants ngaphakathi emzimbeni womuntu, ekunciphiseni emazinga lipoproteins ukuthi babe ukuminyana ongaphakeme, futhi ayikuvumeli buthelela cholesterol, ngakho ekuvimbeleni thrombus kwetinhlavu kanye occlusion semithambo. Le asidi akwenzeki ngokuphazima sikashukela, Ukulawula inqubo ukhulisa amazinga kashukela futhi kuvimbela ukwakheka izimila anomdlavuza.
Uyini lo mkhiqizo? Yini High oleic amafutha sunflower ukunambitha? Hlukanisa ezifana uwoyela ezivamile can ukubunjwa, ngokuvamile wabonisa kwilebula. Ngakho, khona-fatty acid e umkhiqizo akufanele budlule 0.05% futhi oleic acid kufanele okungenani 76%. Ingxenye encane amabhizinisi namuhla ukhiqiza nenye amafutha sunflower nge high oleic acid esuka amafutha omnqumo noma ngisho rapeseed. Kodwa kusukela imikhiqizo efana eziningi umonakalo, ngoba zingayilimaza impilo yomuntu.
imithetho High oleic amafutha sunflower, abakhiqizi kuthiwa waphoqelela neziqondiso yokukhiqiza lo mkhiqizo eminyakeni yamuva ngokuvamile sisetshenziswa womshini imajarini. Kulokhu, izindleko ziyancipha ngo-15% futhi umkhiqizo wokugcina abe nokuphila eshalofini eside ngenxa ukumelana namachibi. Sunflower izinhlobo nge high oleic acid ezithakazelisa kakhulu Abenzi begazi diesel , nalokho okubizwa ngokuthi i-chemistry oluhlaza.
High oleic amafutha sunflower eseqala ukuveza esanda kutholakala, ngakho emakethe manje esigabeni kumiswa. Ngokuzayo kuyoba inombolo enkulu bahlinzeka chemical nokudla izimboni. Lokhu kungenxa owafuna kusukela embonini kawoyela, kanye neqiniso lokuthi abantu abaningi baqala ukuphila ngendlela enempilo. Izitshalo Russian High sunflower oleic ugxile engxenyeni enkulu e-Krasnodar futhi laseStavropol izindawo. Ngakho-ke, ngo-izitolo zokuthenga kanye emashalofini asesitolo ungahlangana oleic okusezingeni eliphezulu amafutha sunflower "Krasnodar elite", kodwa amanye abakhiqizi, kuhlanganise TM "owesifazane Russian", TM "ibhizinisi" TM "Solpro", akayikukunaka na vuma.
High oleic amafutha sunflower ine izimfanelo efanayo nenzuzo njengoba amafutha omnqumo, kodwa izikhathi eziningi kuba eshibhile. Kuye abakhiqizi intengo kungaba isukela ayisithupha ruble ayikhulu namashumi amathathu ngalinye isigamu-litre. High oleic amafutha sunflower, ogama intengo iphinda ingase ixhomeke endleleni iphesenti oleic acid kuwo, abanye abakhiqizi ingaqukatha kufika ku-95% izinto ezinjalo. Konke kuncike futhi phezu izinhlobo sunflower. Kuze kube manje, ambalwa abakhiqizi siqonde ukuthi kungani kwaba nesidingo ukutshala izinhlobo ezithile.
High oleic amafutha sunflower livame ukusetshenziswa ukwenziwa isinkwa, ama-crackers, straws, ama-crackers, khekhe okunoshukela ibhulakufesi ubhontshisi, ingane ukudla asebekhulile. Lo mkhiqizo has a ukunambitheka hlangothi, okuyinto ebaluleke for labo ukuzwa ukungakhululeki kanye ngokusetshenziswa kwamafutha omnqumo. zizwakale kahle futhi amafutha iphunga elimnandi siwenze ingxenye esisemqoka iyiphi ukudla. Luhle ukuthosa, amasaladi, namakhekhe okuzenzela. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo uphephile ukusebenzisa in wendabuko imithi futhi Cosmetology. Kule uwoyela ukwenza okhilimu kanye buso ukuthi usize ukunakekela isikhumba enempilo futhi izinwele. It kalula lingena izingqimba kwesikhumba, asenze ke ngokwemvelo. High oleic amafutha sunflower ingasetshenziswa kunoma yimuphi umkhakha. Into esemqoka lapha - ukukhetha imikhiqizo yemvelo ezingabalulekile izinga okusezingeni eliphezulu, kungcono uthenge nomakhi omethembayo. Kuleli kuncike endaweni yezempilo kuqala.
amafutha sunflower kuphezulu oleic acid kuyinto uwoyela engabizi analog omnqumo. Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo ophelele ukupheka izitsha ahlukahlukene, it has a ukuphila eshalofini kuqhathaniswa eside. uwoyela okunjalo iqhathaniswa nezinye has a ukumelana namachibi, kanjalo uvimbele ukudala ezinye ukwakheka ezinobuthi therein ngokuhamba ukucutshungulwa kwayo, ngesikhathi isitoreji futhi ngesikhathi isicelo. Lokhu amafutha sunflower baba esisemqoka ekukhiqizeni ukudla crackers sishaye, ukudla okulula, ibhulakufesi okusanhlamvu , nokunye. Futhi-ke isetshenziswa amafomula kwezinsana enakekela asebekhulile. High oleic amafutha sunflower namuhla waqaphela njengoba ewusizo kakhulu. Isetshenziselwa zonke labo ahole indlela yokuphila enempilo. Ngokushesha kukhishwe umkhiqizo ezifana esisemqoka kuyoba omkhulu, ngoba isidingo ukhula hhayi kuphela ukudla, kodwa izimboni futhi yokukhiqiza.
Kefir "Agusha": izithombe, izibuyekezo, ukubunjwa, eshalofini yokuphila
Indlela ukupheka inkukhu kwesibindi nemifino?
Ithebula ngokulandelana kwazo zonke izenzakalo Goncharova Ivana Aleksandrovicha. i-curriculum vitae
Tibo Kurtua: ukuphila, biography nomsebenzi unozinti Belgian
Fish-ithuluzi nezinhlobo zayo